Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » IATA isungula isiqinisekiso esitsha sebhetri ye-lithium
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba ezizii-Hong Kong • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Iziko lokuGqwesa kwabaQinisekisi abazimeleyo (i-CEIV) yeLithium Ibhetri esungulwe yi-IATA ukuphucula ukuphathwa ngokukhuselekileyo kunye nokuthuthwa kweebhetri ze-lithium kulo lonke unikezelo lwentengiso.
Iibhetri zeLithium yimithombo yamandla ebalulekileyo kwizinto ezininzi zabathengi esithembele kuzo sonke.
Kubalulekile ukuba iibhetri ze-lithium zithunyelwe ngokukhuselekileyo ngomoya nokuba zineemveliso ezigqityiweyo okanye njengezinto zonikezelo lwamatyathanga ehlabathi.
Ukuhanjiswa kwe-CEVA sisiqinisekiso sokuqala sebhetri ye-CEIV Lithium yokusebenza kwayo kwisikhululo senqwelomoya saseHong Kong nakwisikhululo senqwelomoya saseAmsterdam Schiphol.
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) isungule isetifikethi seshishini esitsha- iZiko lokuGqwesa kwabaQinisekisi abaZimeleyo (i-CEIV) yeLithium Ibhetri-ukuphucula ukuphatha ngokukhuselekileyo kunye nokuthuthwa kweebhetri ze-lithium kuyo yonke indawo yokuhambisa.
“Ibhetri yeLithium yimithombo yamandla ebaluleke kakhulu kwizinto ezininzi zabathengi esithembele kuzo sonke. Kwaye kubalulekile ukuba sizithumele ngokukhuselekileyo ngomoya nokuba ziimveliso ezigqityiweyo okanye njengamacandelo kumatyathanga onikezelo lwehlabathi. Kungenxa yoko le nto siphuhlise isatifikethi sebhetri ye-CEIV Lithium. Inika abathumeli neenqwelo-moya isiqinisekiso sokuba iinkampani eziqinisekisiweyo zisebenza kwelona nqanaba liphezulu lokhuselo nokhuseleko xa kuthunyelwa iibhetri ze-lithium, utshilo uWillie Walsh, IATAUMlawuli Jikelele kunye neCEO.
Ukuhanjiswa kweebhetri ze-lithium (zizodwa okanye iimveliso ezigqityiweyo) kufuneka zithobele imigangatho yokhuseleko esekwe kakuhle yendlela ezenziwa ngayo, kuvavanywa, kupakishwa, kumakishwa, kubhalwe amagama kwaye kwabhalwa. Ezi mfuno zezona zinto ziphambili kwimigaqo ye-IATA Lithium Battery Shipping Regulations (LBSR) kunye neMimiselo yeMpahla enobungozi ye-IATA (DGR) edibanisa ulawulo kunye nokufaka okuvela kumashishini nakwiingcali zikarhulumente.
Ukuhanjiswa kwe-CEVA sisiqinisekiso sokuqala sebhetri ye-CEIV Lithium yokusebenza kwayo e Isikhululo senqwelomoya saseHong Kong kwaye Isikhululo senqwelomoya iAmsterdam Schiphol, Ukulandela ixesha elibanzi lokulinga.
“Siyavuyisana ne-CEVA ngokuba yinkampani yokuqala yokufezekisa izatifikethi ze-CEIV Lithium Battery. Ukusuka kubaphathi beempahla, iinkampani zokuphatha umhlaba, abathumeli beempahla kunye neenkampani zokuhambisa ngenqanawa, uninzi lwabachaphazelekayo kulandelelwano lwexabiso oluthatha inxaxheba kwi-CEIV Lithium Battery, yomelela kwaye isebenze ngakumbi kwishishini. Ekugqibeleni, sonke sifuna ukubona uthungelwano lweendlela ze-CEIV zeLithium Ibhetri kunye nabathathi-nxaxheba abaqinisekisiweyo ngemvelaphi, indawo yokufikela kunye neendawo zokuhamba, utshilo uWalsh.
“Abathengi bethu beemoto, ezempilo kunye neetekhnoloji bayakuxabisa ukukwazi kwethu ukusombulula iingxaki ngaphandle kwendawo esiya kuyo okanye uhlobo lwempahla, njengebhetri ye-lithium-ion. Amava ethu ekuhambiseni uluhlu olubanzi lweebhetri zisenze iqabane elifanelekileyo ne-IATA ekuvavanyeni isiqinisekiso sabo se-CEIV. IATA iyaqhubeka ukukhokela kwindlela yokubonelela ngemigangatho, imigaqo kunye nezikhokelo zokuphucula umgangatho kunye nokhuseleko kumzi mveliso wothutho lomoya. Esi siqinisekiso sitsha sinika abathengi nokuzithemba ngakumbi ekukwazini kwethu ukuthutha ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo iibhetri zabo ze-lithium-ion, ”uPeter Penseel, COO wezithuthi zomoya ze-CEVA Logistics.